ဆောင်းပါး > တိုတောင်းသောအတွေး > ဂျယ်ရမီ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ဂျယ်ရမီကိုပုံသဏ္ဌာန်မကျသည့်ကိုယ်ခန္ဓာ၊ နှေးနှေးကွေးသောရောဂါနှင့်နာတာရှည်ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်သောရောဂါဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့တိုင်သူ့မိဘများကသူ့ကိုပုံမှန်ဘဝဖြစ်အောင်တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးပုဂ္ဂလိကကျောင်းသို့ပို့ခဲ့သည်။
အသက် ၁၂ နှစ်တွင်ဂျယ်ရမီသည်ဒုတိယတန်းတွင်သာတက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ဆရာဒေါ်ရစ်မီလာသည်သူနှင့်မကြာခဏအပူတပြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကမြည်သံနဲ့ဆူညံသံတွေလုပ်ပြီးကုလားထိုင်ကိုခေါက်လျက်ထွက်သွားတယ်။ တခါတရံသူသည်တောက်ပသောအလင်းသည်သူ၏ ဦး နှောက်၏အမှောင်ထုထဲသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားသည်နှင့်တူသည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်ဂျယ်ရမီသည်ဆရာကိုစိတ်ဆိုးစေသည်။ တစ်နေ့တွင်သူမသည်သူ၏မိဘများကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကြံဥာဏ်ယူရန်ကျောင်းသို့သွားရန်ပြောခဲ့သည်။
Forresters သည်အချည်းနှီးသောအတန်းထဲတွင်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေစဉ် Doris က“ ဂျယ်ရမီဟာအထူးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတကယ်ပဲရှိတယ်။ သူ့မှာသင်ယူမှုပြproblemsနာမရှိတဲ့တခြားကလေးတွေနဲ့အတူနေတာဟာမတရားဘူး။ "
မစ္စစ်ဖောရက်စတာကသူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူက“ မစ္စစ်မီလာ။ သူတကယ်ရောက်နေတာကိုငါတို့သိတယ်
သူမ၏မိဘများထွက်သွားပြီးမကြာမီတွင်ဒေါရစ်သည်ဆီးနှင်းပြတင်းပေါက်မှကြည့်။ ထိုင်နေသည်။ ဂျယ်ရမီကိုသူမ၏အတန်းတွင်ထားခြင်းသည်မမျှတပါ။ သူမသည်ကလေး ၁၈ ယောက်ကိုသင်ကြားခဲ့ရပြီးဂျယ်ရမီမှာရောဂါဖြစ်နေသည်။ ရုတ်တရက်သူတို့အပြစ်ရှိတယ်ခံစားရတယ်။ “ အိုဘုရားသခင်၊ ဒီနေရာမှာငါညည်းညူနေတယ်၊ ​​ငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကဒီဆင်းရဲတဲ့မိသားစုနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးဂျယ်ရမီကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကူညီပေးပါ။
နွေ ဦး ပေါက်လာပြီးကလေးများသည်လာမည့်အီစတာအကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာပြောဆိုနေကြသည်။ Doris သည်ယေရှုအကြောင်းပုံပြင်ကိုပြောပြပြီးနောက်ဘဝအသစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၏စိတ်ကူးကိုအလေးပေးရန်ကလေးတစ် ဦး စီအားပလတ်စတစ်ဥကြီးတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ သူမက“ ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုမင်းဒီအိမ်ကိုယူပြီးမနက်ဖြန်ပြန်ပို့ပြီးဘဝအသစ်ကိုပြသနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ယူဆောင်လာစေချင်တယ်။ မင်းနားလည်လား
"ဟုတ်တယ်၊ ကလေးများအားစိတ်အားထက်သန်စွာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် - အားလုံးဂျယ်ရမီ။ သူကဂရုတစိုက်နားထောင်ခဲ့တယ်၊ သူကလုပ်ငန်းကိုသူနားလည်သလားဟုသူမတွေးမိသည်။ သူသည်သူ့မိဘများကိုဖုန်းခေါ်။ စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြကောင်းပြောပြနိုင်သည်။
နောက်တစ်နေ့မနက်ခင်းတွင်ကလေး ၁၉ ယောက်ကျောင်းသို့ရောက်လာပြီးရယ်လ်ကာစကားပြောသောအခါကြက်ဥများကိုပိုးမွှားတောင်းကြီးထဲသို့ Ms. Miller စားပွဲပေါ်ထည့်လိုက်သည်။ သင်္ချာသင်ခန်းစာပြီးနောက်ကြက်ဥကိုဖွင့်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။
ဒေါရစ်သည်ပထမဆုံးဥ၌ပန်းတစ်ပွင့်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပန်းတစ်ပွင့်ဟာအသက်တာသစ်၏အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ “ အပင်တွေကမြေထဲကထွက်လာရင်နွေ ဦး ပေါက်ရောက်ပြီဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ရှေ့တန်းတန်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့လက်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်။ "ဒါကကျွန်တော့်ကြက်ဥပါပဲ။
နောက်ဥတွင်ပလတ်စတစ်လိပ်ပြာတစ်လုံးပါ ၀ င်သည်။ ဒေါရစ်ကဤသို့ပြောခဲ့သည် -“ ခူကောင်တစ်ကောင်သည်လှပသောလိပ်ပြာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးကြီးထွားလာသည်ကိုငါတို့အားလုံးသိသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကလည်းဘဝသစ်ပဲ။ Judy Little ကဂုဏ်ယူစွာပြုံးပြီးပြောလိုက်သည် - "မစ္စစ်မီလာ၊ ဒါကငါ့ဥပဲ။ "
ထို့နောက်ဒေါရစ်တွင်ရေညှိပါသောကျောက်တုံးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူမသည်မော့စ်လည်းဘဝကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းရှင်းပြသည်။ Billy နောက်ကျောအတန်းကနေဖြေသည်။ "ကျွန်တော့်အဖေကကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်" ထိုအခါ Doris ကစတုတ္ထကြက်ဥကိုဖွင့်လိုက်သည်။ အဲ့ဒါကဗလာ ဂျယ်ရမီကသူဖြစ်ရမည်ဟုသူထင်သည်။ သူကညွှန်ကြားချက်များကိုနားလည်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သူမသာသူမသည်သူ၏မိဘများကိုခေါ်ရန်မေ့လျော့ဘူး။ သူမသူ့ကိုရှက်ရွံ့စေလိုခြင်းမရှိဘဲသူမကြက်ဥကိုတိတ်တဆိတ်ဘေးဖယ်ထားပြီးနောက်တစ်ခုကိုကောက်ယူလိုက်သည်။
ဂျယ်ရမီရုတ်တရက်တက်ပြော၏။ "မစ္စစ် Miller, သင်သည်ငါ့ကြက်ဥအကြောင်းပြောဆိုချင်ပါသလား?"
Doris ကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဖြေကြားခဲ့သည် -“ ဒါပေမယ့်ဂျယ်ရမီ - မင်းရဲ့ဥဟာဗလာကျင်းနေပြီ!” သူကသူမရဲ့မျက်လုံးတွေကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး“ ဒါပေမယ့်ယေရှုရဲ့သင်္ချိုင်းဂူလည်းလွတ်သွားပြီ”
အချိန်ရပ်တန့်သွားသည်။ သူမသည်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါဒေါရစ်က“ သင်္ချိုင်းဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလဲသိလား” ဟုမေးခဲ့သည်။
"အိုဟုတ်တယ်! ယေရှုကိုအသတ်ခံရပြီးအဲဒီမှာထားလိုက်တယ်။ အဘသည်ထိုအရာကိုမှတ်လေ၏။ ခေါင်းလောင်းမြည်တယ်။ ကလေးများကျောင်းခြံဝသို့ထွက်ပြေးသွားသောအခါဒေါရစ်သည်ငိုခဲ့သည်။ သုံးလအကြာတွင်ဂျယ်ရမီသေဆုံးခဲ့သည်။ သင်္ချိုင်းတွင်သူ့အားနောက်ဆုံးအရိုအသေပေးခဲ့သူများသည်သူ၏ခေါင်းရှိဥတွင်း၌ဥ ၁၉ လုံးကိုတွေ့လိုက်ရ။ အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
သတင်းကောင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သခင်ယေရှုထမြောက်တော်မူသည်။ ဤ ၀ ိညာဉ်ရေးရာပွဲနေ့တွင်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေပါစေ။